IPolynesia, ngaphezu kwamabhishi amangalisayo nolwandle oluzolile | Ukuhamba kwe-Absolut
IPolynesia yigama lapho kufakwa khona indawo enkulu yomhlaba wethu Oceania. Kodwa-ke, ngomqondo obanzi, isukela ku- IHawaii kuze kube Isiqhingi sase-Easter. Sekukonke, kuneziqhingi eziningi ezisakazeka ngaphezulu kwe- i-Pacific Ocean okwamazwe ahlukene.
Phakathi kwabazimele, kukhona Samoa, Tuvalu, I-New Zealand, I-Kirivati o Tonga. Ngokwabo, ezinye iziqhingi zingezika- United States njengalezo zaseHawaii, uku EFrance njengokushaya ucingo I-polynesia yaseFrance noma ku United Kingdom njenge iziqhingi ze-pitcairn. Kepha zonke lezi zindawo zabelana ngesiko lasendulo, izindawo ezinhle namabhishi e-paradisiacal. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngePolynesia, sikukhuthaza ukuthi uqhubeke ufunde.
1 Yini okufanele uyibone futhi uyenze ePolynesia
1.1 IHawaii, isango elingasentshonalanga eliya ePolynesia
1.2 Iziqhingi zaseCook, isisekelo esimsulwa sasePolynesia
1.3 ILas Mariana, okwakuyimpahla yaseSpain yangaphambili
1.4 IKiribati, izwe eliqala unyaka
1.5 IFrench Polynesia, uzibuthe wezokuvakasha
1.5.1 ITahiti neSociety Islands
1.5.2 IziQhingi zaseMarquesas, ezinkulu kunazo zonke eFrench Polynesia
1.5.3 I-Easter Island, ukuqedela ukuvakasha kwethu ePolynesia
Yini okufanele uyibone futhi uyenze ePolynesia
Ngeke sikwazi ukuchaza esihlokweni esisodwa konke ongakwenza ePolynesia kunikezwe ubukhulu bayo obukhulu nokwehluka. Ngalesi sizathu, sizogxila kwezinye zezindawo ezinhle kakhulu nazo eziguqulwe kangcono ukukuthola njengomhambi.
IHawaii, isango elingasentshonalanga eliya ePolynesia
Ukukutshela nje ngakho konke iHawaii okufanele ikunikeze, singadinga i-athikili engaphezu kweyodwa. Ngoba yakhiwe yiziqhingi eziyisishiyagalolunye, iziqhingi eziningana kanye neziqhingi. Oahu Yiyona eyakha inhlokodolobha yombuso, Honolulu, futhi nalapho kukhona khona umlando odumile wePearl Harbor. Ingabe, Ikhanda ledayimane futhi i ibhishi le-waikiki yizindawo zayo ezaziwa kakhulu. Kepha ungavakashela namathafa amahle ngokumangazayo njenge Ingadi ka-Amy BH Greenwell Ethnobotanical.
Ngakolunye uhlangothi, Kauai, waziwa ngo «I-Garden Island»Iyona ndawo eseningizimu kakhulu yalesi siqhingi futhi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu. Ngohlobo oluhlaza futhi olujabulisayo, izindawo ezifana ne- Na Pali ugu, namawa alo ahlaba umxhwele, noma i- I-Waimea Grand Canyon.
Futhi Maui Kumele ubone eHawaii. Njengalezi ezedlule, lesi siqhingi sikunikeza imihlobiso yazo zonke izinhlobo. Kodwa amabhishi alo amangalisayo avelele. Futhi, ngaphezu kwakho konke, okudumile umgwaqo oya eHana, cishe amakhilomitha ayikhulu agijima engxenyeni yawo esenyakatho-ntshonalanga, ewela izimpophoma, imifula, amabhuloho kanye namawa. Futhi akufanele uphuthelwe ukuphuma kwelanga kuMaui ku- Intaba-mlilo iHaleakala, ngamathoni wegolide amangalisayo.
Ekugcineni, isiqhingi sesine okufanele usivakashele yilesi esibiziwe, impela Isiqhingi Esikhulu. Mhlawumbe kukukhumbuza okuthile ngeLanzarote. Ngoba i- Izintaba-mlilo iNational Park, ngeKilauea, Mauna Kea neMauna Loa, ezinye zazo ezisakhipha ukugeleza kodaka.
Iziqhingi zaseCook, isisekelo esimsulwa sasePolynesia
Lesi siqhingi, izwe elihlotshaniswa ne- I-New Zealand, kufaka phakathi iziqhingi ezisakazeke ngaphezu kwamakhilomitha-skwele ayizigidi ezimbili oLwandlekazi i-South Pacific, okuzokunikeza umbono wakho konke ekuhlinzekayo.
I-Rarotonga izindlu inhlokodolobha, egama layo lingu I-Avarua, futhi uzothola kuwo isimo samanje nesentshonalanga. Kodwa-ke, ikunikeza nengqikithi yePolynesia ezindaweni ezifana ne- Imakethe yePunanga Nui, lapho ukulele, ama-sarong kanye ne-gastronomy ejwayelekile kuvamile. Isibonelo, izinhlanzi eziluhlaza zasolwandle noma ika iyabulala namaqabunga e-taro ashubile noma urukau.
Isiqhingi sesibili esiheha kakhulu kakhulu iCook Aituaki. Athiu Futhi lizungezwe yizixhobo zamatshe, kepha futhi ungangehlela kulo umxhwele Umhume wase-Anatakitaki futhi ubheke izinyoni ezingaziwa.
Ngokwengxenye yayo, isiqhingi sase Muri ilungele ukutshuza nge-scuba ezindaweni ezinjengeBlack Rock noma iMatavera. Y IMangaia Iwumbukwane kunayo yonke, ngoba imidwebo yayo yakhiwa yindandatho yamakhorali enamazinga amabili afihle intaba enkulu yentaba-mlilo phansi kwentaba Rangimotia massif.
Ibhishi eziqhingini zokupheka
ILas Mariana, okwakuyimpahla yaseSpain yangaphambili
Akuwona wonke umuntu owaziyo ukuthi lezi ziqhingi kwakungezakhe España kuze kube sekupheleni kwekhulu le-XNUMX. Ngakho-ke, inokumangala okungaphezu kokukodwa okugcinelwe wena. Isibonelo, yena Ulimi lwesiChamorro, ngokufana okukhulu neSpanishi. Eqinisweni, igama lalo uqobo "Mariano".
AmaMariana amahle kakhulu angaba umzila, obizwa nangokuthi "Isiqhingi esinokuthula" ngensimu yayo egcwele amapulazi amancane nemvelo. Kepha okudume kakhulu ISaipan, lapho i- IGrotto, umgodi omkhulu wamatshe wamatshe othakazelisa abatshuzi abavela kuwo wonke umhlaba. Esikhundleni salokho, UTinian Ibuye ikunikeze izimangaliso zemvelo kepha futhi abaningi abashiye ukufakwa kwamasosha e-WWII.
AmaSouth Mariana anendawo yawo yokuheha isiqhingi sase Guam. Kuyikhaya lezimangaliso ezifana nendawo yemvelo yokugcina Indawo yaseRitidian, nolwandle lwayo oluhehayo, futhi ukuwa kwe-talofofo. Ngaphandle kokukhohlwa i-cosmopolitanism ye ITumon Bay noma umnyuziyamu ovulekile ovulekile owakha i- IPacific War National Historical Park.
Inhlokodolobha yaseGuam Ukukopela, lapho unezinsalela eziningi zaseSpain njenge ICathhedral Basilica Yegama Elimnandi likaMariya, etholakala, ngokunembile, eduze kwePlaza de España. Kepha idolobha elinabantu abaningi kakhulu Dededo, esethafeni lamakhorali enyakatho yesiqhingi.
IKiribati, izwe eliqala unyaka
Kutholakala enyakatho-mpumalanga ye- Australia, izwe elizimele elenziwe ngamaqembu amaningana eziqhingi neziqhingi. Phakathi kwezokuqala kukhona Tarawa y iziqhingi zaseGilbert, Ellice, La Línea neFénix. Mayelana nemizuzwana, iKiritimati noma isiqhingi sikakhisimusi Yindawo yokuqala emhlabeni ukugubha unyaka omusha kanye nendawo yokukhonza yangempela yabatshuzi kanye nabadobi.
IKiribati kungenzeka ingenye yezindawo ePolynesia ezigcinwe kahle impilo yendabuko. Abantu bakhona bahlala ikakhulukazi ezindlini zamapulangwe futhi badla ukhukhunathi, izithelo zezinkwa nenhlanzi. Ungayibona, ikakhulukazi uma uvakashela iziqhingi ezikude kakhulu.
Inhlokodolobha yaleli lizwe enelukuluku ikhona INingizimu Tarawa, eyakhiwe njengengalo yomhlaba phakathi koLwandlekazi iPacific nolwandle lwangaphakathi. Igama lakhe ngu Ambo, yize idolobha elibaluleke kakhulu Bairiki, likuphi iphalamende.
IFrench Polynesia, uzibuthe wezokuvakasha
Ngaphandle kwakho konke esikuchazele khona, mhlawumbe indawo yale ndawo eyaziwa kakhulu ngezokuvakasha kwamazwe ibizwa ngeFrench Polynesia. Yakhiwe iziqhingi eziyikhulu neshumi nesishiyagalombili neziqhingi eziningana ezihlelwe zaba iziqhingi ezinhlanu. Kepha sizokukhombisa ezithakazelisa kakhulu.
ITahiti neSociety Islands
I-Tahiti kufanele ibone ukuthi uya eFrench Polynesia. Kuyisiqhingi esikhulu kunazo zonke e Iziqhingi zomphakathi, yona yona ehlukaniswe iziqhingi zaseBarlovento naseSotavento. Kwabokuqala, ngaphezu kweTahiti uqobo, UTetiaroa o Moorea, ngenkathi eyokugcina ihlanganisa I-Huaine, Thupai noma, eyaziwa kakhulu ngokubaluleka kwayo kwabavakashi, Bora Bora.
Ngokuyikho okwakamuva kuvakashelwa kakhulu kuneTahiti, evame ukufakwa endaweni yokudlula. Noma kunjalo, leli iphutha elibi kakhulu. Sikukwazisa ukuthi uchithe izinsuku ezimbalwa wazi iTahiti ngoba inokunikeza okuningi.
Inhlokodolobha yayo ePapeete, lapho ungavakashela khona i-cathedral futhi, ngaphezu kwakho konke, izimakethe zayo. Phakathi kokugcina, kunelukuluku lokwazi lowo onamaparele. Kepha, uma ufuna ukuzwa ukuphefumula kwesiqhingi, kungcono uvakashele ukudla. Futhi, uma usafuna ukwanda kakhulu kwesiko lasePolynesia, sincoma ukuthi Imyuziyamu yaseTahiti neziQhingi zayo.
Kufanele futhi uthathe uhambo lokuya ngaphesheya kwesiqhingi, lapho uzothola khona izindawo ezithile ezingavamile ezifana ne- Isigodi sasePapenoo, okuholela ethempelini lika Imali yokugibela futhi, indawo engcwele yabomdabu. Noma lezo ukukhweza aorai, lapho unemibono emangalisayo yesiqhingi.
Ngakolunye uhlangothi, uma ukhetha ugu, kufanele uhambe ngasenyakatho-ntshonalanga, okuzokuyisa emabhishi amangalisayo njengalawo I-Tautira futhi, ngaphezu kwakho konke, lokho kwe U-Teahupo'o, edume ngokuba nelinye lamagagasi amahle kakhulu emhlabeni.
Uma unesifiso semivubukulo, kufanele uvakashele Marae yesiqhingi. Ziyizindawo ezingcwele empucuko yangaphambi entshonalanga eyayinezinhloso zomkhosi. Ngokumangazayo, njengezindawo zenkolo ze-Iron noma i-Bronze Age yethu, zahlukaniswa ngamatshe.
Ekugcineni, esiqhingini esiseduze sase Moorea Izimanga ezimnandi zikulindile. Ukusuka eTahiti kutholakala kalula ngesikebhe noma ngendiza futhi awukwazi ukuphuthelwa yifayela le- intaba iRotui, enye yezinto ezibabazeka kakhulu kuyo yonke iPolynesia; umxhwele indawo yokupheka noma ukubonwa kwemikhomo, okuvame kakhulu emaphethelweni ayo.
IziQhingi zaseMarquesas, ezinkulu kunazo zonke eFrench Polynesia
Ziyiziqhingi ezinkulu kunazo zonke ezakha iFrench Polynesia. Baqoqelwe ndawonye Iziqhingi zaseWashington, the Revolution futhi i nguMendaña. Abokugcina baqamba igama labo kunoma ngubani owabathola ngo-1595: owaseSpain u-Álvaro de Mendaña, owababhapathiza njengo Iziqhingi zaseMarquesas zaseMendoza ukuhlonipha umphathi-mphathi wasePeru ngaleso sikhathi.
Noma ungazange uvakashele kubo, bazokujwayela ngoba bangukuhlelwa kwamanoveli athile ngu Herman Melville futhi ngokuba yindawo yomhlalaphansi yomdwebi UPaul gaugin. Isiqhingi esikhulu kunazo zonke kulezi UNuku hiva, lapho inhlokodolobha ikhona, I-Taiohane.
Kodwa-ke, iMarquesas ibe nempumelelo encane kakhulu yezokuvakasha kunamanye asePolynesia. Ngenxa yalokhu, bagcine izindawo zabo ezingakaze zisebenze kuze kube namuhla. Ngokuphathelene nemvelo yayo, ayihlangene nakancane namachibi athambile anama-turquoise water of, Bora Bora. AmaMarquesas angamazwe anezintaba futhi amangelengele, anotshani obuluhlaza namawa asogwini aphela emabhishi esihlabathi amnyama.
IHiva Oa, eziqhingini zaseMarquesas
Mhlawumbe ukungabi khona kwezokuvakasha ngobuningi nakho sekuholele ekutheni izakhamuzi zaseMarquesas zilondoloze kangcono izindawo zazo kunezinye izindawo. Amasiko we-polynesian. Yindawo ephelele ukuthi ubone ifayela le- haka noma imidanso yesiko futhi ukuze wazi ubuciko babo futhi uvakashele izinsalela zabo zemivubukulo. Okufuna ukwazi ngokukhethekile kungokwabo tiki, ezinye izithombe ezinkulu ezimise okwabantu ezingahle zihlobane ne- moai kusuka e-Easter Island.
Ekugcineni, cishe amakhilomitha angamashumi amathathu ukusuka eNuku Hiva unesiqhingi sase Ua Pou, lapho kumangalisa khona amakholomu e-basaltic yokuphakama okukhulu okuyinika isici semfihlakalo.
I-Easter Island, ukuqedela ukuvakasha kwethu ePolynesia
IRapa Nui noma i-Easter Island mhlawumbe ingenye yezindawo zezivakashi ezithandwa kakhulu ePolynesia. Ngakho-ke, akukho okudlula ukuqedela ukuvakasha kwethu kule ndawo lapho.
Kulahleke oLwandlekazi iPacific, cishe amakhilomitha ayizinkulungwane ezine ukusuka ezwenikazi laseMelika nabaningi abavela eTahiti, uma izimfihlakalo Siyakhuluma, URapa Nui unabo bonke. Emhlabeni wonke aziwa ngawo moai, lezo zithombe ezikhethekile ezizala amakhanda abantu.
Lapho izakhamuzi zakhona zasendulo zifika kulesi siqhingi esilahlekile nokuthi bazakha kanjani lezi zithombe ezinkulu kakhulu akwaziwa. Kepha kuyaziwa ukuthi babenemikhosi efana naleyo ye- inyoni-indoda nokuthi bathuthukisa umbhalo we-hieroglyphic obizwa ngokuthi i-rongo rongo. Kulinganiselwa nokuthi moai bayeka ukwakhiwa cishe ngekhulu le-XNUMX. Kodwa-ke, sonke isiqhingi sigcwele bona, hhayi ukuma nje, abaningi balale phansi ngoba bagcina bewile. Kepha izindawo ezinhle kakhulu ukuzibona zikhona URano Raraku, UTongariki o Ahu akivi. Kokugcina, ama-effigies nawo anobunye bokubheka olwandle.
UMoai e-Easter Island
Kodwa lezi zibalo akuzona kuphela ezikhanga e-Easter Island. Sikweluleka futhi ukuthi ubone isigodi somkhosi wase I-Orongo, lapho, ngokusobala, amakhosi akhethwa futhi anama-petroglyphs angajwayelekile; okuyigugu Ibhishi lase-Anakena futhi, IHanga Roa, inhlokodolobha encane yesiqhingi, okukuyo ibandla lesiphambano esingcwele ungabona izibalo eziningana zabangcwele abangamaKristu kepha ziqoshwe ngesitayela sabo moai.
Sengiphetha, lapha sigcina lapha uhambo ebesiluphakamise kuwe ngokusebenzisa i- I-Polynesia. Sikutshele ngezinye zezindawo ezinhle kakhulu. Kepha futhi ungakhetha ukwenza uhambo lwakho lokuya kwabanye abafana ne- Umbuso WaseTonga, lapho ungabona khona i- trilito kaHa'amonga'aowaziwa ngokuthi "I-Stonehenge yasePolynesia"; Tuvalu, lapho benemidlalo yabo ethile, Ngiyakulangazelela, noma lezo ezidumile Iziqhingi zaseFiji. Azikho kulezi zindawo ezizokudumaza nawe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » I-Polynesia